Shiinaha White Oak Multifunctional Double Sariid adag Sariir jiifka jiifka # 0113 Soo-saar iyo Warshad | Yamazonhome
White Oak Multifunctional Double Sariid adag Sariir jiifka jiifka # 0113
Lambarka tusaalaha: Amac-0113
Cabir: 1570 / 1870mm * 2100 * 890mm
Sariirta waxaa laga sameeyay alwaax adag
Geedka cad ee laga keeno Waqooyiga Ameerika wuxuu leeyahay qaab adag, adkeysi, iyo adkeysi wanaagsan. Waa mid ka mid ah keymaha dhamaadka sare leh waxayna ka fiican tahay inta badan geedihii casaa ee suuqa ku yaalay. Hadhuudhka alwaaxda waa mid cad oo dhalaalaya, qoryuhu waa jilicsan yahay oo dabiici ah, oo dushiisa ku yaal, sida haddii aad ku dhex jirtid Dhexgalka dabeecadda, dadku waxay ku seexan karaan si nabad ah. Sariirta 100% sariirta adag ma leh xariiqyo dheeri ah. Waxay leedahay qaab dhab ah oo qadiimi ah, qalab damiir dhab ah, qaab dhismeed adag, iyo kormeer rasmi ah oo rasmi ah muddo 50 sano ah oo cimri dherer ah.
Qaab-dhismeedka loox oo dhan oo adag oo alwaax ah ayaa ku filan inuu qaado culeyska qoyska. Sariirtan laba-geesoodka ah waxay leedahay qaab-dhismeed adag waxayna ka gudubtay tijaabada culeyska culeyska ma guurtada ah. Uma baahnid inaad ka walwasho taageerada xasilloonida iyo inaad si nabad ah u seexato. Qaabka safku wuxuu ka samaysan yahay geed adag oo xoog leh, oo leh laba gunta. Lugaha ku taageer si aad si adag u taageerto furaashka.
Sariirta sariirta dhinaceeda badan
Saldhigyo nabadgelyo oo ku dhex yaal sariirta madaxiisa, saldhigyo dib loo soo celin karo + godadka fiilooyinka USB, oo baabi'inaya baahida loo qabo xargaha xoogga leh, naqshadeynta keydinta, taleefannada gacanta, muraayadaha oo aan meel dambe la dhigaynin, aan kaa eryo riwaayadaha, cun digaag cadaadis. Uguyaraan afar wareeg kadib Keliya taxaddar leh "tababar" ayaan kula kulmi karaa. Adkee tenon iyo tenon qaab-dhismeedkiisa, iyo culeyska xamuul qaadista ayaa ka xasilloon.
Qalab tayo sare leh oo sariir go'an leh
Qalabka qalabka ee tayada sare leh wuxuu xiraa jirka sariirta, oo ah mid adag oo waara, oo aan sahlaneyn in miridhku dhaco, sariirta qoryaha adagna waxay leedahay awood qaadasho xoog leh. Suufka aamusan ee aamusan ayaa ka horjoogsanaya looxa iyo sariirta dusheeda inay wax xoqaan, wuxuuna seexdaa faragelin la'aan qeylada, taasoo kuu oggolaaneysa inaad si fudud u seexato. Dhabarka dambe ee weyn ayaa si xor ah loo waafajin karaa barkinta ayaa ku raaxeysaneysa inay ku tiirsato, iyo ku ciyaarista taleefanka ma yeeleyso indhahaaga.
Lugaha sariiraha oo hal-cad ah
Sariirta sagxadeeda waxaa ku qalabeysan T-beam, agabkuna waa mid aan mugdi ku jirin, wuxuuna ka samaysan yahay alwaax adag, sedex taageer, sariirta cadaadiskeedu waa MAX, leexasho ma leh, hurduna waa damaanad. Lugaha sariirta waa dhumuc leeyihiin, mana sahlana in la ruxo, mana sahlana in la jabiyo. Loogu talagalay in la sameeyo baaritaano badan Kadib sariir macquul ah, caruurtu si fudud ayey ugu fadhiisan karaan, waxaana jira boos fara badan oo xagga hoose ah oo aad kabo gashan karto, iwm.
Sariir adag oo casri ah oo fudud oo casri ah
Sariir adag oo alwaax ah oo ka tarjumi karta ruuxa caqliga leh xulista shayga ilaa qaabka
Waxaan raadineynaa alaabta ceeriin adduunka oo dhan
Si taxaddar leh loo xushay oo laga helay geedkii caddaa ee ugu tayada sarreeyay
Kaliya si loo abuuro xariifnimadan saafiga ah
Fududeynta iyo ficil ahaanta ayaa isku mid ah
Hore: DWF jumlada la buufin karo yoga derin caado isboorti jimicsi hawo jimicsi Tumbling Mat Air Floor 0393
Xiga: Sariirta Sariirta Sariirta ee Sunta Sariirta Sariirta Sariirta Sariirta Princess # 0114
Naqshadeynta Surfboard Sup Racing Yoga Paddle Boa ...
Tababarka Taekwondo Hawada Furaashka Hawo La buufin karo ...
Aeliana Hutch Animal Hutch oo leh Ramp 0243
Alaabta guriga fadhiga maqaar alwaax adag oo casri ah ...